हिरो हिरोइन् बन्नु भन्दा पहिला…. – MM Nepal
हिरो हिरोइन् बन्नु भन्दा पहिला….
July 30, 2017 July 30, 2017 mmnepal
बिजयरत्न तुलाधर , प्रियंका कार्कीलाई अहिले नेपाली चलचित्र जगतमा सबैभन्दा चर्चित नायिकाको रुपमा लिईन्छ । आजभन्दा करीब पाँच वर्ष अगाडि “थ्री लभर्स” शिर्षकको चलचित्रमा नायिका बन्न७३घढस भन्दा अगाडि उनी अमेरिका बस्दै आएकी थिइन् भने उनले “मिस टिन २००५”को ताज पनि जितेकी थिइन् ।
यसरी मिस टिनको उपाधी जित्नु भन्दा अगाडि उनले निर्देशक नारायण पुरीले बनाएको “महादेवी”मा बाल कलाकार भई अभिनय गरी सकेकी थिइन् । त्यतिबेला उनी सात वर्ष कि मात्र भएकी थिइन् । बाल कलाकारको रुपमा शुरु भएको उनको अभिनय यात्रा अहिले नेपाल कै एक शिषर्थ नायिका सम्म पुगेकी छिन् । प्रियंका कार्कीले लोकप्रियताको दौडमा यसरी अग्रता लिनु भन्दा अगाडि नम्रता श्रेष्ठलाई नेपाली चलचित्र जगत कि शिषर्थ नायिका मानिन्थ्यो ।
एउटा संयोग नै भन्नु पर्ला कि नम्रता श्रेष्ठले पनि आफ्नो अभिनय यात्रा बाल कलाकार कै रुपमा गरेकी हुसन् । उनले बाल कलाकारको रुपमा अभिनय गरेको चलचित्र “संगीनी” हो । दीपक आलोकले निर्देशन गरेको यस चलचित्रमा दीपाश्री निरौलाले नायिकाको रुपमा अभिनय गरेकी थिइन् । “संगीनी”मा अभिनय गर्दा नम्रता श्रेष्ठ कक्षा एक पढ्दै थिइन् । बाल कलाकार कै रुपमा अभिनय यात्रा थालेर पछि नायिकासम्म बनेकाहरुमा ईश्वरी प्रधान, रागीनी खड्गी, दिप्ती गिरीहरु पनि पर्छन् तर नायिकाको रुपमा भने उनीहरु स्थापित हुन सकेनन् । यसरी नायिकाको रुपमा लोकप्रियता कमाउन सफल भएकी अर्की नायिका नीता ढुंगाना हुन् । नीता ढुंगानाले रेखा थापा र विपना थापाको प्रमुख भुमिका रहेको “मितिनी” लगायत श्रीकृष्ण श्रेष्ठ र निरुता सिंहको “अजम्बरी नाता”मा बाल कलाकारका रुपमा अभिनय गरेकी थिइन् ।
नायकहरुको चर्चा गर्दा सलोन बस्नेत र संंयम पुरी कुनै समय चल्तीका बाल कलाकारहरुका रुपमा गनिन्थे भने अहिले नायकका रुपमा आफ्नो यात्रा अगाडि बढाई रहेका छन् । यसरी नै बाल कलाकारका रुपमा अभिनय यात्रा थालेका अभिनेताहरुमा विल्सन विक्रम राई पनि पर्दछ । उनले निर्देशक लक्ष्मीनाथ शर्माको “साथी”मा बाल कलाकार भई काम गरेका थिए ।
नायक नायिकाका रुपमा स्थापित हुन भन्दा अगाडि अर्कै रुपमा आफ्नो पाइला अगाडि बढाउनेहरु धेरै छन् । कुनै समयका चर्चित नायक विराज भट्ट, सुशिल क्षेत्री, दिलिप रायमाझी र नायिका मेलिना मानन्धरहरु नायक नायिकाको रुपमा स्थापित हुन भन्दा अगाडि “ग्रुप डान्सर”का रुपमा काम गर्थे ।
दिलिप रायमाझीले चलचित्र “शंकर”को एक गीतमा नायिका जल शाहको पछाडि पछाडि नाच्ने युवकका रुपमा काम गरेका थिए भने छि गएर दिलिप रायमाझी र जल शाहले “घुम्टो” लगायतका केही चलचित्रहरुमा नायक नायिकाहरुको रुपमा सँगसँगै अभिनय पनि गरे । नायिका मेलिना मानन्धरले “सपना” चलचित्रको एउटा गीत “सुन्दरीको मनमा बस्ने को होला ” गीतमा ग्रुप डान्सरका रुपमा काम गरेकी थिइन् । यसमा शिव श्रेष्ठ र कृष्टि मैनाली ले प्रमुख कलाकारका रुपमा नृत्य गरेका थिए । त्यस्तै गरी चर्चित र लोकप्रिय नायिका मौसमी मल्ल पनि नायिका हुन पुर्व शर्मिला मल्ल र शिव श्रेष्ठ अभिनीत चलचित्र “कान्छी”मा “कान्छी हे कान्छी” गु्रप डान्सरको रुपमा काम गरेकी नायिका हुन् ।
दिलिप रायमाझी ग्रुप डान्सरबाट नायक बनेका थिए भने अर्जुन कार्की फाइटर गु्रपमा काम गर्दा गर्दै नायक बन्न पुगेका थिए । उनले “वीर गणेशमान” लगायतका धेरै चलचित्रमा द्वन्द कलाकारका रुपमा काम गरेका थिए भने पछी मात्र नायक बनेका हुन् । “वीर गणेशमान” चलचित्रमै नाती जर्नेलको भुमिका निर्वाह गरेर चलचित्र अभिनयमा पदार्पण गरेका आर्यन सिग्देल अहिले चल्तीका हिरोका रुपमा लिइन्छ । यही चलचित्रमा शहिद गंगालालको भुमिका निर्वाह गरेका मनोज आर।सी। पनि अहिले एक सशक्त अभिनेताका रुपमा स्थापित भई सकेका छन् । आर्यन सिग्देल नायकको रुपमा लोकप्रियताको शिखर चढ्दै गर्दा “मेरो एउटा साथी छ” शिर्षकको चलचित्र पनि खेलेका थिए । यही चलचित्रमा एउटा गौण भुमिकामा देखा परेका थिए, दयाहांग राई । यसरी नगन्य खालको भुमिकाबाट अभिनय यात्रा शुरु गरेका दयाहांग राई अहिले सबैभन्दा लोकप्रिय अभिनेताका रुपमा अगाडि बढीरहेका छन् ।
यसरी साना तिना भुमिकाबाट अभिनय शुरु गरेर पछी स्थापित कलाकार बनेकाहरुमा अरुणिमा लम्साल पनि पर्छिन् । उनले निर्देशक दीपक श्रेष्ठको “अजम्बरी माया”मा नायिकाको कलेजका साथीहरुको समुहमा रहेर अभिनय गरेकी थिइन् । अरुणिमा जस्तै सानै भुमिकाबाटा आफ्नो अभिनय थालेकी अर्की अभिनेत्री शर्मिला मल्ल हुन् । नेपालमा नीजि लगानीकर्ताहरुले निर्माण गरेको दोश्रो चलचित्र “जुनी”मा त्यस्तो खालको भुमिका निर्वाह गरेकी थिइन् भने पछि के घर के डेरा, बासुदेव, मायाप्रिती र कान्छीबाट नायिकाको रुपमा स्थापित हुन पुगिन् । शर्मिला मल्लले चलचित्रमा अभिनय गर्नु भन्दा पहिला विज्ञापनमा पनि अभिनय गरेकी थिइन् । उनले अभिनय गरेको “एभरेस्ट पेस्ट”को विज्ञापन त्यतिबेलाको चर्चित विज्ञापन मानिन्थ्यो । यसरी विज्ञापनबाटै अभिनय यात्रा शुरु गर्नेहरुमध्ये एक मनिषा कोइराला पनि हुन् । उनले “मेघा उल”को विज्ञापनमा सबैभन्दा पहिला अभिनय गरेकी थिइन् भने उनको अभिनय यात्रा नेपाली चलचित्र “फेरी भेटौंला”बाट शुरु भएको थियो । पछि बलिउडमा समेत स्थापित नायिका बन्न सफल भएकी मनिषा कोइरालाले पछि निर्देशक दीपेन्द्र के।खनालको “धर्मा”मा पनि अभिनय गरीन् ।
बेग्लै क्षेत्रबाट अभिनयमा आएकाहरु मध्ये सिपोरा गुरुङ्ग पनि पर्छिन् । “भुंईमान्छे”चलचित्रमा नायिकाको रुपमा देखापर्नका लागेकी सिपोरा गुरुङ्ग भलिबलका खेलाडि हुन् । यसभन्दा अघि निर्देशक शोभित बस्नेतले “दुर्गा”चलचित्रमा मार्शल खेलाडिलाई नायिक बनाउन खोजेका थिए तर कुरा नमिले पछि रेखा थापालाई नायिकाका रुपमा लिएका थिए । यसरी नै सदाबहार नायकका रुपमा चिनिएका भुवन के।सी। पनि गायनबाट अभिनयतिर आएका नायक हुन् । उसो त उदित नारायण झाले पिरती र कुसुमे रुमाल , रामकृष्ण ढकालले आशिर्वाद , यम बरालले माइती चलचित्रमा नायककै रुपमा अभिनय गरीसकेका छन् तर उनीहरुले नायकको रुपमा आफ्नो यात्रा कायम भने राखेनन् बरु ईण्डियन आइडल समेत बन्न सफल प्रशान्त तामाङ्ग आफु गायक नै भएपनि गोर्खा पल्टन ,परदेशी कान्छा , निशानी लगायतका केही चलचित्रहरुमा अभिनय गरेर आफुलाई नायकका रुपमा पनि स्थापित गर्न खोजेका थिए । उनका केही चलचित्रहरु व्यावसायिक रुपमा सफल नै भए पनि एक नायकको रुपमा उनको यात्रा भने खासै अघि बढ्न सकेको भने देखिंदैन ।
केही समय अगाडिसम्म नायिका रेखा थापा क्याम्पका नायक भने चिनिएका आयुष रिजालले आफ्नो कला यात्रा क्यामेराम्यानका रुपमा शुरु गरेका थिए भने पुराना अभिनेता अर्जुन श्रेष्ठ पनि नायक बन्नु अगाडि देखि नै दाङ्गमा सिनेमा हल चलाउँदै आएका चलचित्रकर्मी हुन् । यसरी नायक नायिकाको रुपमा स्थापित हुनु अगाडि कोही कहाँबाट त कोही कहाँबाट आएको देखिन्छ भने अहिले भने अधिकांश नायक नायिकाहरु कि नाट्य क्षेत्रबाट कि त म्युजिक भिडियोबाट आउने गरेकी देखिन्छ । र यस्ता कलाकारहरुको संख्या गणना गरेर साध्य नै छैन । उल्लेख नै गर्नु पर्दा सौगात मल्ल, दयाहांग राई, अनुप बराल, मेनुका प्रधान, नम्रता श्रेष्ठ, सरीता गिरी लगायतका पर्छन् भने म्युजिक भिडियोबाट आएकाहरु मध्ये शिल्पा पोखरेल, पल शाह, वर्ष शिवाकोटी लगायतका दर्जनौंको नाम अगाडि आउँछ ।
गायिका मेलिना राईको एकल मिठास स्वरबद्ध नयाँ गीत ‘सुन्न सकिनँ’ बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ… ।
गायिका सरस्वती लामाको रक–मै जम्ने भो बोलको तीज गीतको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक….